China Slurry Pump Zvishandiso Sarudzo fekitori nevatengesi | YAAO
Mune slurry pombi iyo impeller uye mukati meiyo casing inogara ichionekwa kune slurry uye inofanirwa kuchengetedzwa zvinoenderana nekupfeka.
"Kusarudzwa kwemidziyo yekumisikidza uye casing kwakakosha sekusarudzwa kwepombi pachayo!"
Kune matatu matatu akasiyana mamiriro anogadzira kupfeka mune slurry pombi:
Kune matatu makuru marudzi eabrasion:
Mune slurry pombi isu tine kunyanya kukuya uye kuderera kunetseka abrasion.
Chiyero cheArasion chinoenderana nesaizi yekukura uye kuomarara.
Abrasion inongowanikwa munzvimbo mbiri mune slurry pombi:
1.Pakati pemhepo uye nzvimbo yakamira.
2. Pakati pesimbi sleeve uye mira kurongedza.
Uku ndiko kupfeka kwakakurisa mumapombi eslurry. Icho chikonzero ndechekuti zvidimbu mune slurry zvinorova izvo zvinhu pamusoro pamakona akasiyana.
Kukukurwa kwevhu kwakakanganiswa zvakanyanya nemabatirwo anoitwa pombi. Kukurwa kwevhu kuri, kazhinji, kuri padiki paBEP - ow chiyero, uye kunowedzera nekuderera pamwe nekukwira kuyerera.
Nezvikonzero zvisina kunyatsonzwisiswa, kupfeka kwevhu kunogona kuwedzera zvakanyanya kana pombi ichibvumidzwa kushanda pa "snore"; Ndokunge, kutora mweya kupinda mupombi yekupinza.
Izvo zvataurwa kuti izvi zvinogona kukonzerwa necavitation, nekuda kwenzvimbo dzepombi dzinozunguzika semhepo inoyerera pamusoro pavo. Izvi zviri, zvakadaro, musiyano wekubvuma semabhuru emhepo kazhinji anodzvinyirira kubvongodza nekufamba kuenda kumafuru emhepo.
Kune matatu makuru marudzi ekukurwa kwevhu:
Mhedzisiro yekukukurwa kwezvinhu zvepombi:
Iyo impeller iri pasi pekukanganisa kupfeka (yakakwira uye yakadzika) kunyanya muziso, padanho regland shroud (A), apo iyo turns inotendeuka 90 °. Pamucheto unotungamira weane (B).
Inotsvedza mubhedha uye yakaderera angular kukanganisa kunoitika pamwe nevanes pakati pemhepo shrouds (C).
Side liners (Inlet uye kumashure liners)
Side liners vari pasi zvishoma nezvishoma mumatope mubhedha uye kupwanya uye kukuya abrasion.
Iyo volute inoenderana nekukanganisa kupfeka pamvura yakatemwa. Inotsvedza mubhedha uye yakaderera angular kukanganisa kusakara kunoitika mune imwe yakasara volute.
Ngura (uye kurwisa kwemakemikari) kwezvikamu zvakanyorova muSlurry Pump chinhu chakaoma kunzwisisa zvese simbi uye elastomer zvinhu.
Kuti utungamirirwe, makemikari ekudzivirira matafura esimbi uye elastomer zvinhu zvinopihwa pane zvinotevera uye muchikamu Chemical Resistance Tables.
Max. Impeller Zano
Kumhanya (m / s)
Yakakwirira sevhisi temp. (OC)
Zvichienderera Neapo neapo
(-50) kusvika 65 100
Wear protection - ndedzipi sarudzo?
Kune dzimwe sarudzo hombe pakusarudza kupfeka dziviriro yemapombi eslurry:
Impeller uye casing muHome Metal mune akasiyana maalloys esimbi chena nesimbi.
Impeller mune elastomers uye casing inodzivirirwa neelastomer liners. Elastomers anowanzo ri rubber mune akasiyana hunhu kana polyurethane.
Kusanganiswa kwemhepo yakaoma yesimbi uye elastomer-yakamisikidzwa casings.
Kusarudzwa kwekupfeka zvinhu
iyo sarudzo yezvipfeko zvezvipenga ndeyeyero pakati pekurwisa kupfeka uye mutengo wekupfeka zvikamu
Pane nzira mbiri dzekudzivisa kupfeka:
Izvo zvakapfeka zvinhu zvinofanirwa kuve zvakaoma kudzivisa kutema kuita kwekukanganisa zvisimba! kana Iyo yekupfeka zvinhu inofanirwa kuve yakasununguka kuti ikwanise kupinza zvinotyisa uye nekudzokerera kwezvikamu!
Kusarudzwa kwekupfeka zvikamu kunowanzoenderana nematanho anotevera:
Saizi yakasimba (yakasimba SG, chimiro uye kuomarara)